उपत्यकामा कस्ता व्यक्तिलाई देखिएकाे छ कोरोना? (भिडिओ) – Khabar Silo
बुधबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा १ सय १७ जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यीबाहेक अन्य संक्रमित भने विदेशबाट आएका हुन्। महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले अधिकांश संक्रमित दुबई, कतार र भारतबाट आएको जनाए।
उनका अनुसार दुबईबाट आएकामध्ये १५ जनामा संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिएपछि यसले जाेखिम बढ्ने चिन्ता थपेको छ।
उनले त्यस्ता संक्रमितहरू उपत्यकाका विभिन्न ठाउँका रहेको भन्दै अब ती व्यक्तिहरूको आवतजावत बढी हुने तरकारी पसल, रेस्टुरेन्ट र वरिपरिका व्यक्तिको पनि परीक्षण गर्ने तयारी रहेको बताए। यसले समस्या कहाँसम्म पुग्यो भन्ने आँकलन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उनको विश्वास छ।
उपत्यकामा पछिल्लो समय विभिन्न पेशाकर्मीमा संक्रमण देखिन थालेको छ। रसियन दूतावासमा कार्यरत एकजना सुरक्षागार्डमा पनि संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बाहिरी जिल्लाबाट उपचारका लागि उपत्यका भित्रिने व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ।
केही संक्रमितहरू स्वास्थ्यकर्मी समेत रहेको पाण्डेले जानकारी दिए। यसरी उपत्यकामा कतै नगएको व्यक्तिमा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि ‘लोकल ट्रान्समिसन’ थप फैलिने जोखिम बढेको छ।
निर्देशक पाण्डे भन्छन्, ‘अब चिन्ता के छ भने यो छिटपुट रुपमा लोकल ट्रान्समिसन त देखियो तर यो कुन तहको हो भन्नलाई चिन्ताको विषय बनेको छ।’ उपत्यकामा ठूलो जनघनत्व भएकाले पनि विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डे।
उनले उपत्यकामा संक्रमण फैलिए नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने बताए। त्यसैले ठूल्ठूला सहरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ। निर्देशक पाण्डेले अहिलेको संक्रमणस्थिति हेर्दा यो ढिलोचाँडो समुदायस्तरमा पुग्ने जिकिर गरे।
अब संक्रमण रोक्न कन्ट्याक्ट ट्रेसिङभन्दा पनि सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। उपत्यकामा समेत शतप्रतिशत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी बनाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै पाण्डेले भने, ‘टेकु अस्पतालमा परीक्षण गर्न आउनुहुन्छ तर उहाँहरू त्यहाँ आउँदा केमा आउनुभयो, बाटोमा को-को सँग भेट्नुभयो? ती व्यक्तिहरू ट्रेसिङ गर्न छुटेका छन्।’
यसका लागि सुरुमा संक्रमित बस्ने ठाउँको वरिपरि परीक्षण गर्ने र त्यहाँ पनि संक्रमण देखिए ठूलो समूहमा परीक्षण गर्ने महाशाखाकाे तयारी छ। उनले काठमाडौंमा ठूलो संख्यामा परीक्षण हुन नसकेको भन्दै परीक्षणको दायरा पनि बढाउनुपर्ने बताए।
यसअघि उपत्यकामा समूहगत रुपमा झण्डै १५ हजार जनाको पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। जसमा कालिमाटी तरकारी पसल, महानगरपालिकाकाे सरसाफाइमा काम गर्ने कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र पत्रकारहरूको समेत परीक्षण गरिएको थियो।
‘हामीले के बिर्सिनुहुँदैन भने हामी भारतसँग जोडिएका छौं। त्यसैले जहिलेसम्म भारतमा यो रोगको नियन्त्रण हुँदैन नेपालमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने।
निर्देशक पाण्डेले अब कोरोना साथीजस्तै भएको र योसँगै जानुपर्ने बाध्यता आइपरेको जनाए। अब यो ठाउँमा कोरोना छ भन्ने सोचेर हिँड्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
त्यसका लागि अनिवार्य मास्क लगाउने, साबुनपानीले हात धुने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै काठमाडौं जस्तो धेरै जनघनत्व भएको ठाउँमा तरकारी पसल र भिडभाडमा जाँदा सुरक्षा अपनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
उनले अब काठमाडौं उपत्यकामा विशेष ध्यान अर्को रोग भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्ने बताए। जसमा मुटु, मिर्गौला, दमका रोगी पर्छन्। साथै गर्भवती महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
निर्देशक पाण्डेले उपत्यकामा संक्रमण थप बढ्नसक्ने भन्दै अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउँछन्। उपत्यकामा संक्रमण कहाँ-कहाँ पुगेको छ भनेर पत्ता लगाउन महाशाखाले ‘कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ नामको ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाएर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
यो टिम स्थानीय तहमा समेत रहने भएकाले उपत्यकामा पनि महानगरमा भएका टिमसँग सहकार्य गरेर ट्रेसिङको काम गरिने निर्देशक पाण्डेले बताए। अहिलेसम्म उपत्यकामा देखिएका अधिकांश संक्रमित भने तेस्रो मुलुकबाट आएका छन्।
‘मन्त्रीले पनि हामीले भनेकै सूचानाका आधारमा भन्ने हो’ उनले भने, ‘समुदायमा भन्नलाई ठूलो संख्यामा संक्रमित हुनुपर्छ जसको कुनै पनि ट्राभल हिस्ट्री हुनुहुन्न। त्यसैले केही ठाउँमा धेरै व्यक्तिमा देखिएको ‘क्लस्टर केस’ हो तर समुदायमा गएको छैन।’
अब बिदेश जानलाई चाटर्ड उडानको टिकट काट्नु नपर्ने भएको छ । सरकाले अब उडान नियमित गर्न लागेको हो । सरकारले कोरोनाको कारण समस्या परी स्वदेश फर्कनैपर्ने अवस्थामा अबदेखि कोही नेपाली नरहेको बताएको छ । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को बैठकले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो । सिसिएमसीका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले कोही नेपाली विदेशमा समस्यामा […]
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। बुधबारमात्रै थप ११४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार बुधबार रौतहट, बाग्लुङ, मकवानपुर, झापा, बारा, सप्तरी, दाङ, सुर्खेत, बाँके, सिरहा र रूकुमपूर्वका थप ११४ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमितहरूमध्ये अधिकांश भारतबाट आएकाहरू छन्। सरकारले पिसिआर […]